नेकपा – Page2– Himalaya Television
११ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिवादी र तानाशाहको संज्ञा दिँदै पार्टी विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका नेताहरु पदीय लोभमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । प्रतिनिधित्वको हिसाबले संसदको चौथो ठूलो दल संघीय सरकारमा...
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डे आज बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दै
११ कात्तिक २०७८ हेटौंडा । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे आज मुख्य मन्त्री बन्नु हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनको तर्फबाट पाण्डेले हिजो नै दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले दिउँसो...
एमालेमा विवाद चर्किँदै गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा यस्तो उत्साह
६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । दसबुँदे सहमितका विषयमा नेकपा एमालेमा विवाद चर्किएका बेला यसैबाट अलग भई गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एक महिनामै अभूतपूर्व उत्साह देखिएको दाबी गरेको छ। प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले वक्तव्य जारी गरी आफ्नो पार्टी एकीकृत...
१ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । विधि र पद्धतिको भाषण गरेर नथाक्नेबाटै विधि र पद्धति उल्लंघन भयो भने के हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्नेबाटै त्यसको उल्लंघन भयो भने दोष कसको हुन्छ ? नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत...
३१ असोज २०७८ काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गरेको छ । अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा...
२२ असोज २०७८ काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेको हो । अब प्रदेश...
२२ असोज २०७८ काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारबाट सहभागी हुने मन्त्रीको नाम आज टुङ्गो लगाउने भएको छ । हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो आज बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गर्ने भएको बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी...
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन : के भन्छन् प्रतिनिधिहरु ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ असोज २०७८ ललितपुर । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनलाई केपी शर्मा ओलीमय बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला प्रतिनिधिहरुले भने व्यक्ति नभई पार्टी र पार्टीको नीतिलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ललितपुरको गोदाबरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै
५ असोज २०७८ काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै छ। करिब एक महिना अगाडि नेकपा एमालेबाट नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अलग भएको समूहले स्थापना गरेको उक्त पार्टीको पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो।...
नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय समिति बैठक मङ्गलबार, यस्ता छन् एजेण्डा
४ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय समिति बैठक असोज ५ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । करिब एक महिना अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अलग भएको समूहले स्थापना...